Emulator Android 5 tsara indrindra ho an'ny Windows 10 - Nohavaozina (2020) - Softwares
Tsy misy tsy fahampian'ny emulator ankehitriny. Noho izany, raha mitady emulator hitantanana Android amin'ny Windows PC ianao dia azonao atao tokoa ny mitady azy.Raha ny marina dia betsaka ny antony mety ilainao ny mampiasa emulator Android amin'ny Windows PC. Ohatra, afaka miditra amin'ny rindranasa Android marobe amin'ny birao ianao, ary koa ny Gamers dia afaka mankafy lalao Android mahatalanjona amin'ny efijery lehibe kokoa ary mitohy hatrany ny lisitra.
Eny, efa fantatrao izao izay tombony lehibe azo amin'ny fampiasana emulator Android, noho izany, azonao antoka fa te hanandrana iray ianao.Misy ihany koa ireo emulator Android izay tsy mandeha rehefa asehon'izy ireo ny mpampiasa. Noho izany, nasaronay anao izahay. Izahay dia mitanisa ireo emulator Android 5 tsara indrindra ho an'ny PC.Ireo ematera rehetra ireo dia tokony ho afaka miasa amin'ny Windows 7, 8, 8.1 & 10 ihany koa.
Mitady iOS Emulator ho an'ny PC ? Zahao ny mpitari-dalana anay vao haingana
Emulator Android tsara indrindra ho an'ny PC (Windows 10 & 8)
Eny ary, ka ny MEmu Play dia emulator Android mahatalanjona iray hafa izay miasa amin'ny Windows izay nahazo laza be tato ho ato.Ankoatr'izay, ity emulator ity dia miaraka amin'ny fahafahany mihazakazaka tranga marobe amin'ny fampiharana sy ny Android amin'ny fotoana iray ihany. Ary koa, ny rindrambaiko dia mifototra amin'ny Android Nougat (7.1.2) amin'ny alàlan'ny default ary afaka mihazakazaka Kit Kat (4.4) ary koa Lollipop (5.0) koa.Io Emulator io koa dia mamela anao hanana varavarankely telo samy hafa ho an'ireo kinova Android telo. Noho izany, tsy mitovy amin'ny hafa mihitsy.
Eny, andao ho marin-toetra, Tena asa sarotra tokoa ny manonona tokana na endri-javatra roa fotsiny amin'ity Emulator mahatalanjona ity satria ny MEmu dia tonga manana endri-javatra mahasoa be dia be.
Ny iray amin'ireo fiasa tsara indrindra amin'ny emulator dia ny fanohananany ny Intel sy ny CPU AMD koa izay tena tsara avy amin'ny fomba fijery mifanentana.Fantatray fa mahatalanjona, fa endri-javatra tsy misy amin'ny emulator Android maro any io.
Araka ny fantatsika, ny emulator dia manana fanatsarana mahavariana ho an'ny lalao gameplay, tsapanay ho toy ny iray amin'ireo emulator Android tsara indrindra ho an'ny mpampiasa ankapobeny koa io.Azonao atao ny mihazakazaka ny emulator amin'ny kinova Windows na Windows 7 na 10 ary mifanentana amin'ny Intel sy AMD ihany koa.
Noho izany, avelao isika hiresaka momba ny BlueStacks eto. Raha tena marina, ny zavatra tsara indrindra momba ny BlueStacks dia ny hoe afaka mihazakazaka amin'ny karazana fitaovana Windows izy io, na AMD na Intel.BlueStacks dia fantatra amin'ny iray amin'ireo emulator Android tsara indrindra azonao jerena amin'ny Windows tsy misy isalasalana.Tsy vitan'ny hoe manarona lalao fotsiny fa amin'ny maha mpampiasa anao ankapobeny, raha te hankafy fampiharana Android vitsivitsy amin'ny Windows PC ianao dia avelao aho hiteny aminao, BlueStacks dia emulator tsara amin'ny serivisinao.
Nandritra ny taona maro dia nandalo fiovana maro izy io ary nivoatra tamin'ny fomba tsara kokoa ary ny BlueStacks ankehitriny dia mifototra amin'ny Android 7.1.2 dia ny Nougat.Ireo mpandrindra ny BlueStack dia nampanantena ihany koa amin'ireo mpampiasa fa hitondra BlueStacks 5 tsy ho ela miaraka amin'ny motera filalaovana vaovao ary hiorina amin'ny Oreo ny kinova Android.
Ary koa, hanomezana traikefa mahatalanjona ny fanahafana ny Android amin'ny Windows, BlueStacks koa dia niara-niasa tamin'i Samsung hitondra ny Galaxy Store amin'ny sehatra misy azy. Tena milay izany, sa tsy izany?Izy io koa dia manome anao fidirana amin'ny lalao Android kalitao marobe amin'ny Windows izay misy Fortnite, RAID, Sonic Forces, ary maro hafa. Ary tsy afaka manadino momba ny fampisehoana isika.
Nambaran'ny orinasa fa ny BlueStacks dia mahery vaika kokoa noho ny finday Android mahazatra any.Ambonin'izany dia manana karazana fiasa marobe toy ny multi-instance, sarintany fanalahidy ary motera kilalao AI miorina amin'ny fampisehoana mahavariana izy.
Amin'ny ankapobeny, raha mitady ny emulator Android tsara indrindra amin'ny Windows ianao dia azo antoka fa eo an-tampon'ny lisitra ny BlueStacks.
Remix OS Player dia emulator Android maimaimpoana tanteraka izay miasa amin'ny Windows izay mifototra amin'ny Android 6.0 Marshmallow.Raha lazaina amin'ny fomba marina, Remix OS Player dia amin'ny lafiny maro, iray amin'ireo emulator Android tsara indrindra any ho an'ny windows. Tsy mitondra endri-javatra taonina maro toy ny karazana tamba-jotra, fanohanana Google Play tompon-tany, sarintany an-tsarimihetsika, fikirana tanana ho an'ny tanjaka famantarana, toerana, bateria ary maro hafa.
Izahay dia nanandrana azy tamin'ny solosaina finday sasany ananantsika ary manao ny marina, ny rindrambaiko dia tsy namela anay mihitsy.Ny fitoniana no tadiavin'ny rehetra ary omen'ny mpilalao OS OS an'io eo alohany.Ary koa, mila mitandrina ao an-tsainao ianao, Remix OS Player dia tsy eo an-dalam-pandrosoana intsony. Fa ny azonao atao dia ampiasao ny fananganana taloha izay mifototra amin'ny Marshmallow. Tena mahavita tena tsara.
Izahay dia nanandrana ity emulator ity ary avelao aho hiteny aminao, miaraka amina endri-javatra mahavariana maro toy ny fanatsarana ny Gameplay, ny fahaizana manova ny fananganana ny fitaovana Android. ny prop, ny mifanentana amin'ny mpanara-maso ary ny interface interface-friendly dia zavatra vitsivitsy fotsiny izay ananan'i Nox Player. Miaraka amin'izany, azo antoka fa hihoatra ny emulator Android hafa amin'ny Windows.
Noho izany, raha misy olona mitady emulator Android amin'ny Windows izay misy endri-javatra an-taonina hafa ankoatry ny filalaovana fotsiny dia tsara tokoa, Nox Player no azo antoka ho anao.
Miorina amin'ny Android Lollipop 5.1.1 izy io, saingy ny ampahany iray mahatalanjona dia ny ahafahanao mihazakazaka kinova Android marobe hatramin'ny Nougat amin'ny fampiasana ny fampiasa Multi-Drive, ary maimaim-poana misintona.
Misy antony iray hafa izay anafihan'ny Nox Player ny Emulator hafa dia ny fahafaha-miditra root. Raha mety nanandrana namaka tamina Emulator hafa ianao, mety ho fantatrao fa asa sarotra tokoa izany.
Na izany aza ao amin'ny Nox Player, ny mila ataonao dia ny mamela fotsiny ny fifandimbiasana eo amin'ny sehatra, ary ny BOOM! - miorim-paka ianao. Tsotra be izany, sa tsy izany? Nox Player dia tsara ho anao ary tena mino aho fa io dia iray amin'ireo emulator Android tsara indrindra amin'ny Windows.
Ny LDPlayer dia nitombo haingana tamin'ny lazany noho ny fahombiazany lehibe. Tsy hino izany ianao, fa volana vitsivitsy monja taorian'ny nanombohany. Raha ny amin'ny kinova Android, ny LDPlayer dia mihazakazaka amin'ny Android Nougat (7.1.2) noho ny fahombiazana mahatalanjona sy ny mifanentana ary koa maimaimpoana tanteraka ny misintona.Raha mitady emulator Android ho an'ny Windows 10 ianao izay natao indrindra amin'ny filalaovana dia avelao aho hiteny aminao, ny emulator farany indrindra ao an-tanàna dia LDPlayer.
Misy ihany koa fivarotana fampiharana ho an'ny lalao izay miaraka amin'ny emulator ary mandeha tsara amin'ny LDPlayer izy ireo. Raha mitady hanatsara ny fahombiazan'ny mitovy ianao dia azonao atao ihany koa ny manararaotra ny Virtualization Technology avy amin'ny pejy setting. Hiteny aho fa ny LDPlayer dia emulator Android vaovao izay manolotra anao tsotra. Saingy, mandritra izany fotoana izany fanandramana Android mahery vaika amin'ny solosaina Windows, na filalaovana izany na amin'ny fampiasana ankapobeny fotsiny.
Miasa tsy misy kilema izy nefa tsy misy hadisoana. Ny emulator dia hihazakazaka am-pilaminana amin'ny Windows PC miorina amin'ny Intel ary hatramin'ny AMD koa.
Noho izany, ny lisitra nomenay etsy ambony dia ny sasany amin'ireo emulator Android tsara indrindra azonao ampiasaina mba hihazakazahana amin'ny Windows PC.Mety ho mpamorona mitady hanandrana fampiharana ianao na mety ho mpampiasa tsotra izay mijery fotsiny manodidina ny lalao vitsivitsy, dia ho hitanao ny emulator tsara indrindra ilainao.
Ireo emulator rehetra ireo dia mahatalanjona fotsiny amin'ny fampisehoana mahafinaritra sy ny endri-javatra maro. Maimaimpoana koa ireto misintona. Noho izany, azonao atao ny misafidy ny tsirairay ary manandrana ho anao irery ny fomba fiasan'izany ho anao sy ny lalaoo koa.
Milalaova PUBG Mobile amin'ny PC
Generator kaody manavotra ps4 maimaim-poana
amazon praiminista mpianatra lany vola
alefa amin'ny chromecast amin'ny solosaina
misintona sarimihetsika maimaim-poana tsy misy sonia na sarany
amboary teboka akony amin'ny pc